Xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda horyaalada yurub iyo Coutinho leysku heysto - Somgoal
Home Bundesliga Xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda horyaalada yurub iyo Coutinho leysku heysto
Chelsea, Manchester United iyo Leicester City ayaa xiriir lasameeyey wakiilka ciyaariyahanka reer Barcelona Philippe Coutinho si ay sommarka ula wareegaan, lkn Chelsea ayaa 27 jirka reer Brazil u ah dooqa koowaad.
Leicester City ayaa hogaaminaysa tartanka loogu jiro ciyaarahanka reer Liverpool Adam Lallana kaasoo dhamanayo heshiiskisa dhamaadka xili ciyaareedkaan lkn Arsenal, Everton Crystal palace iyo West ham ayaa sidoo kale xiisanayaan 32 jirka reer ingriis.
Paris St-Germain ayaa usoo bandhigtay dalab ah £44.7m iyo £8.9m oo dheeraad ah weeraryahanka reer Argentin Mauro Icardi, 27 jirkaan oo si amaah uga yimid kooxda Inter Milan ayay PSG xiiseynaysaa inuu sii joogo kooxa.
Arsenal, Chelsea, ayaa labadaba xiisaynaya 18 jirka daafaca ee reer Germany Kaan Kurt oo u cayaaro kooxda reer Germany Borussia Monchengladbach kooxdeeda labaad.
Chelsea, ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer Brazil ayaa si dadban u sheegay inuu heshiis gaaban siinayo ilaa dhamaadka xili ciyaarkeedkaan, 31 jirkaan ayaa heshiiskiis dhamaan doonaa 30 june.
Maclin Ole Gunnar Solskjaer ayaa u xaqiijiyey kooxdiisa Manchester United in ay sanadkaan ku tartami doonaan suuqa kala iibsiga sanadkan kadib qarash badan kaga baxay dhibaatada fayraska korona owgiis.
Bayern Munich ayaa dib uga dagtay xiisaheeda ciyaarhan Jadon Sancho kahor inta aan la hakin horyalka jarmalka korona owgis, lkn Borussia Dortmund ayaa ku ilaashanaysa £100m 20 jirkaan reer England, ayadoo laga iibin doonin kaaxaha reer Bundesliga.
Previous articleBayern Munich oo hogaanka sii adkaysatay iyo Dortmund oo guulaysatay
Next articleHoryaalka Premier League ayaa dib loo bilaabi doono 17 juun.